CentOS Stream: chii ichi chitsva modhi uye zvaunofanira kuziva | Linux Vakapindwa muropa
Unotoziva CentOS, chirongwa icho chinomuka seforogo yeRHEL inochengetwa nenharaunda. Kunyanya, yakauya muna Chivabvu 2004, apo iyo inonzi CentOS 2 yakabva kuRHEL 2.1AS (Advanced Server). Saka kubudirira kweiyi nyowani distro kwaive kwakangoerekana kwaitika, kunyanya yakawana kukosha kukuru pakati pemakambani ekubatira webhu, vanogadzira uye HPC.
Icho chikonzero ndechekuti CentOS yakapa a bhizinesi giredhi system pasina muripo, nekuzvitsigira-wega uye nharaunda yakakura yekusundira chirongwa ichi kumberi. Nzira yekubvisa paRed Hat uye nemitengo iyo iyi imwe distro inayo kana iwe uchida imwe rutsigiro kana yekudzidzisa mabasa ...
Kubva ipapo, munhu wese anoziva mukurumbira uye kubudirira kweCentOS, kuve kumwe kunonyanya kuzivikanwa kupihwa nhasi. Asi ikozvino, zviripo dzimwe shanduko Chii chiri kuitika uye chii chaunofanira kuziva nezvacho. Iwe unotoziva kuti shanduko, kana yaitwa, siya kumwe kuvhiringidzika pakutanga, sezvo paive neakavhurikaSUSE Leap uye Tumbleweed futi.
Muchiitiko cheCentOS, iwe unofanirwa kuziva kuti iri budiriro kuyerera yakaiswa pakati peFedora neRHEL. Mune mamwe mazwi, aya mapurojekiti ane hukama uye anochengeta, sezvinoita SUSE uye kuvhuraSUSE. Mune mamwe mazwi, CentOS ndiyo yekutanga distro yeRHEL, gedhi pakati peFedora neRHEL.
Kuyerera kwacho kungave:
Kumusoro kwerwizi> Kwakadzika nzizi> RHEL
Fedora Linux> CentOS Stream> RHEL
Remangwana reCentOS ndiCentOS Stream, saka tarisiro yeprojekti inozoshandurwa muna 2021. Panopera hupenyu hwe CentOS 8, iri kuvakwazve kweRed Hat Enterprise Linux 8, ichatora nzvimbo kubva kuRHEL, ichishanda sebazi rekuvandudza reRHEL.
Vashandisi veCentOS 8 vazvino vanofanirwa kutarisa kuCentOS Stream 8, iine zvigadziriso zvenguva dzose, kuburitsa-kuburitsa. Nekudaro, kana iwe uchinetsekana neshanduko idzi yenzvimbo yekugadzira, unofanirwa kubata Red Hat kuti uone sarudzo dzauinadzo ...
Izvi zvinogona kuve zvakanaka kana zvakaipa, zvinoenderana nekuti unozvitarisa sei. Parizvino, zvinorevei izvi ndizvozvo Red Hat "inouraya" CentOS Linux saizvozvowo, sezvo CentOS Stream isingafarire izvo maficha aidiwa kwazvo.
Iyo kambani parizvino ndeye IBM, yaita izvi kufamba kusingade kunhengo zhinji dzenharaunda yazvino yeCentOS. Uye vamwe vevashandisi veCentOS Linux variko vakatarisa kuDebian, Ubuntu, openSUSE, nezvimwe.
Zviri zvimwe ikozvino kunouya Rocky Linux, kubva paruoko rweumwe wevagadziri veCentOS. Gregory M. Kurtzer parizvino akatanga chirongwa ichi chitsva chakachengetedzwawo nenharaunda uye chinangwa chayo kugadzirwa kwebhizimusi-giredhi rinoshanda sisitimu ingangove bug-ye-bug inowirirana neRHE, ndiko kuti, inofanira kunge iine mabhugi akafanana uye saka zvakaenzana zvakafanana zvigamba ...
Mamwe mashoko - GitHub saiti yeRocky Linux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » CentOS Stream: chii uye chii chaunoda kuziva
Iwe waigona kutozviona zvichiuya, inyaya yekutamira kuUbuntu Server, Debian.
Hapana .. zvaifadza ..
Ini ndinofungidzira izvi zvinosuruvarisa zvakaipa Red ngowani chena magiravhusi uyo anoda kukunda muhondo.
Ethical hackers inyanzvi dzakadzidza linux kodhi zvakanyanya zvinoita kunge Astra Linux zvakadzama.
Makambani anorasikirwa nemakwikwi pamusoro pebhizinesi, nekuti mamwe haana kugadzirira, ... ndosaka "Red ngowani" vari vamwe vacho vachena ngowani.
Vaviri Rocky vanouya kwavari, handifunge kuti murume akanaka anotsiva, iri MOVIE.
Pindura kuna Juju
Bhizinesi chiyero, ini ndinofungidzira kuti mushandisi akatsamwa, kutamira kune debian ichave mhinduro yedambudziko
Pindura kuna castuza